The Tale of the Princess Kaguya (2013) | MM Movie Store
ပုံပွငျတှေ ၊ ဒဏ်ဍာရီတှဆေိုတာ ကြှနျမတို့ ကလေးဘဝရဲ့ အသညျးစှဲအမှတျတရတှပေါ။ငယျငယျတုနျးက လူကွီးတှပွေောပွခဲ့တဲ့ အိပျရာဝငျပုံပွငျတှေ၊ ကွားဖူးနားဝရှိနခေဲ့တဲ့ ဒဏ်ဍာရီဇာတျလမျးတှေ… ငယျဘဝဆိုတာ ဒါတှနေဲ့ ဖွတျသနျးကွီးပွငျးလာကွရတာမဟုတျလား?
ကြှနျမအတှကျတော့ KAGUYAမငျးသမီးဟာ ငယျစဥျကာလရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုပါပဲ။ ဝါးပငျကနေ မှေးဖှားလာတဲ့ မငျးသမီးလေးဆိုတာ ၂၀၁၄ရုပျရှငျမထှကျခငျကတညျးက ဂပြနျရိုးရာပုံပွငျအဖွဈ စာအုပျတှထေဲမှာ ဖတျဖူးပွီးသားပါ။
ရုပျရှငျထှကျလာတော့လညျး သူငယျခငျြးတှကေ Cinderella, Sleeping Beauty စတဲ့ ဒဈစနေးကာတှနျးတှကေို သဘောကကြွခြိနျမှာ ကြှနျမကတော့ MNTVမှာ ခဏခဏပွတဲ့ THE TALE OF PRINCESS KAGUYAကို စှဲလမျးခဲ့ဖူးပါတယျ။
Studio Ghilibiဆိုတာ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ ထိပျတနျး animeတှေ မှေးဖှားရာနရောတဈခုပါ။ Studio Ghilibiလို့ပွောလိုကျရငျ အမြားစုက တညျထောငျသူ မီယာဇကီကိုပဲ ပွေးမွငျတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီရုပျရှငျကားက တှဲဖကျတညျထောငျသူ တာကာဟာတာရဲ့ လကျရာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး မီယာဇကီရဲ့ ပုံမှနျစတိုငျမဟုတျဘဲ ရှေးဟောငျးပနျးခြီတဈခပျြကို ရငျတလှပျလှပျနဲ့ ၂နာရီကွာ အဓိပ်ပါယျဖျောနရေသလို မသမေသပျခံစားခကျြမြိုး ရပါလိမျ့မယျ။ သူပေးခငျြတဲ့ messageကတော့ ရှငျးပါတယျ။
“သဘာဝတရားကို တနျဖိုးထားပါ” ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဒီရုပျရှငျဟာ messageတဈခုသိသှားတယျဆိုတာထကျကို ပိုပွီး နကျရှိုငျးပါတယျ။ အခွအေနေ အခြိနျအခါကို လိုကျပွီး ခံစားခကျြအမြိုးမြိုးပေးစှမျးနိုငျတဲ့ ဇာတျဝငျတေးဟာ ဒီရုပျရှငျရဲ့ အသကျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
စာသားရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေးတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ သာမနျလယျတောသီခငျြးလေးဟာ Kaguyaနဲ့ တှမှေ့ နှလုံးသားထဲကို ကြောကျစမျးရလေို စိမျ့ဝငျသှားတာ သခြောပေါကျ ခံစားမိပါလိမျ့မယျ။ ဘယျနှခါခါကွညျ့ကွညျ့ မရိုးတဲ့ လှပလှနျးသော masterpiece ပါပဲ။
ပုံပြင်တွေ ၊ ဒဏ္ဍာရီတွေဆိုတာ ကျွန်မတို့ ကလေးဘဝရဲ့ အသည်းစွဲအမှတ်တရတွေပါ။ငယ်ငယ်တုန်းက လူကြီးတွေပြောပြခဲ့တဲ့ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေ၊ ကြားဖူးနားဝရှိနေခဲ့တဲ့ ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းတွေ… ငယ်ဘဝဆိုတာ ဒါတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းကြီးပြင်းလာကြရတာမဟုတ်လား?
ကျွန်မအတွက်တော့ KAGUYAမင်းသမီးဟာ ငယ်စဉ်ကာလရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ ဝါးပင်ကနေ မွေးဖွားလာတဲ့ မင်းသမီးလေးဆိုတာ ၂၀၁၄ရုပ်ရှင်မထွက်ခင်ကတည်းက ဂျပန်ရိုးရာပုံပြင်အဖြစ် စာအုပ်တွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးပြီးသားပါ။
ရုပ်ရှင်ထွက်လာတော့လည်း သူငယ်ချင်းတွေက Cinderella, Sleeping Beauty စတဲ့ ဒစ်စနေးကာတွန်းတွေကို သဘောကျကြချိန်မှာ ကျွန်မကတော့ MNTVမှာ ခဏခဏပြတဲ့ THE TALE OF PRINCESS KAGUYAကို စွဲလမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်။
Studio Ghilibiဆိုတာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း animeတွေ မွေးဖွားရာနေရာတစ်ခုပါ။ Studio Ghilibiလို့ပြောလိုက်ရင် အများစုက တည်ထောင်သူ မီယာဇကီကိုပဲ ပြေးမြင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားက တွဲဖက်တည်ထောင်သူ တာကာဟာတာရဲ့ လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း မီယာဇကီရဲ့ ပုံမှန်စတိုင်မဟုတ်ဘဲ ရှေးဟောင်းပန်းချီတစ်ချပ်ကို ရင်တလှပ်လှပ်နဲ့ ၂နာရီကြာ အဓိပ္ပါယ်ဖော်နေရသလို မသေမသပ်ခံစားချက်မျိုး ရပါလိမ့်မယ်။ သူပေးချင်တဲ့ messageကတော့ ရှင်းပါတယ်။
“သဘာဝတရားကို တန်ဖိုးထားပါ” ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ messageတစ်ခုသိသွားတယ်ဆိုတာထက်ကို ပိုပြီး နက်ရှိုင်းပါတယ်။ အခြေအနေ အချိန်အခါကို လိုက်ပြီး ခံစားချက်အမျိုးမျိုးပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးဟာ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ အသက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
စာသားရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သာမန်လယ်တောသီချင်းလေးဟာ Kaguyaနဲ့ တွေ့မှ နှလုံးသားထဲကို ကျောက်စမ်းရေလို စိမ့်ဝင်သွားတာ သေချာပေါက် ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်နှခါခါကြည့်ကြည့် မရိုးတဲ့ လှပလွန်းသော masterpiece ပါပဲ။